Rooble oo wado qorshe xididada loogu siibayo Yaasiin Farey | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo wado qorshe xididada loogu siibayo Yaasiin Farey
Rooble oo wado qorshe xididada loogu siibayo Yaasiin Farey
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble uu ku howlan yahay, sidii uu meesha uga saari lahaa Taliyaha KMG ee Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey).
Yaasiin Farey waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoona uu Ra’iisal Wasaaruhu tuhunsan yahay in ninkaasi uu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada.
Sidoo kale Yaasiin Farey waxa uu lafdhabar u yahay khilaafka haatan dib uga soo dhex cusboonaaday Ra’iisal Wasaaraha iyo Madaxweyne Farmaajo, ka dib markii uu muran xoogan hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP067, kaas oo sida la sheegay uu Yaasiin Farey ku soo baxay, bishii November.
Taliyaha KMG ee Hay’adda NISA ayaa galaaftay toddobo xubnood oo ka mid ahaa Guddiga Xalinta Khilaafaadka, ka dib markii si aan sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi. Ra’iisal Wasaaraha ayaana 18-kii December shaqada ka eryay xubnahaasi.
Sida uu sheegay Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe, Golaha Wasiirada ayaa xalay taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda, si ay inoogu dhacdo buu yiri doorasho nabdoon oo xasilloon.
“Waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo horey loo ansixiyay, si loo dardargeliyo amniga caasimadda. Amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhaf ah, oo ka kooban dhammaan Ciidamada Qalabka Sida.” Ayuu yiri Wasiirka.
Haddii Rooble uu meesha ka saaro Yaasiin Farey waxa uu noqonaya ninkii 3aad ee ku dhow Madaxweynaha ee uu meesha ka saaro, marka laga soo taggo Fahad Yaasiin iyo Cabdullaahi Aadan Kulane, oo soo noqday Madaxii Shaqaalaha ee Hay’adda Sirdoonka.
Saddexduba waxaa lagu eedeeyay maqnaanshaha ama dilka Ikraan Tahliil Faarax, oo ka tirsaneyd Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka, iyada oo la waayay 26-kii bishii June ee sanadkan maanta ku eg (2021).
Previous articleLafta-gareen oo ka qaybgelaya Shirka Golaha Wadatashiga Qaran
Next articleRooble oo la kulmay Madaxda Jubbaland iyo Puntland (SAWIRRO)